Hindiya waxay sahayda u dirtaa xudduuda lagu muransan yahay ee Shiinaha ka hor jiilaalka
NAGALA SO XARIIR
September 16, 2020 By wardeeq news Reporter Wararka 0
Milatariga Hindiya ayaa dhaqaajiyay dhamaan shabakaddeeda saadka si ay u daabulaan sahayda kumanaan askari ka hor xilliga qaboobaha daran ee xadka Himalaya ee muranka badan ka taagan yahay ee Shiinaha, iyadoo New Delhi ay ku eedeysay Beijing mas’uuliyadda xadka ugu xumaa muddo tobanaan sano ah.
Bilihii la soo dhaafay, mid ka mid ah laylisyada milatari ee ugu weyn India muddo sanado ah ayaa keenay hub aad u tiro badan, qalab, shidaal, sahayda xilliga qaboobaha iyo cuntada Ladakh, oo ah gobolka xadka la leh Tibet ee ay maamusho India, sida ay saraakiishu sheegeen.
Talaabadan ayaa waxaa sababay muran xuduudeedka kala dhaxeeya Shiinaha oo soo billowday bishii Maajo isla markaana isu rogay bishii Juun dagaal gacan-ka-hadal ah. Labaatan askari oo Hindi ah ayaa ladilay halka Shiinaha ay soo gaareen dhaawacyo aan tiradooda la shaacin.
Talaadadii, Wasiirka Difaaca Hindiya Rajnath Singh wuxuu Shiinaha ku eedeeyey inuu jebiyey heshiisyadii hore ee xuduudaha isla markaana uu ballaadhiyey ciidankiisa la geeyey xudduudda buuraleyda ee lagu muransan yahay ee gobolka Ladakh, oo laga xardhay Kashmir oo ay Hindiya maamusho bishii Ogosto.
Singh wuxuu baarlamaanka u sheegay in Hindiya ay ku wargelisay Shiinaha dariiqyo diblomaasiyadeed in “isku daygooda ah in dhinac keli ah wax looga beddelo sida ay hadda yihiin ay xadgudub ku tahay heshiisyada labada dhinac”.
Waxa kale oo uu sheegay in Hindiya ay ka hortag u sameysay xadka labada dal, ciidamadeeduna ay fashiliyeen “isku dayga xadgudubka ee Shiinaha”.
Labada dalba waxay ka gorgortamayaan sidii loo xallin lahaa iska horimaadka, laakiin labada dhinac midkoodna ma uusan laaban. Milatariga Hindiya ayaa hada lagu wadaa inay ilaaliyaan ciidamada la geeyay xadka khiyaanada iyo joogga sare illaa jiilaalka.
Bariga Ladakh, oo ah halka ay ka qaraxday, waxaa caadi ahaan ka shaqeeya 20,000-30,000 oo askari. Laakiin keenista ayaa in ka badan labanlaabantay xiisadaha, sarkaal milateriga ah ayaa yidhi, isagoo diiday inuu bixiyo tiro sax ah.
More Arrested for Rape and Assassination of Hamdi Mohamed
Swedish PM meets with Somalia’s ambassador to Somalia